Keeniyaatti Manni Barumsaa Barattootarratti Jigee Ijjoolleen Torba Du’an
Fulbaana 23, 2019
Keeniyaa magaalaa Naayroobitti manni barumsaa tokko ijoollee kutaa barataa jiran irratti jigee lubbuun barattoota 7 battalumatti darbe. Barattoonni 57 kaanis miidhaan irra dhaqqabuu mootummaan biyyattii beeksiseera
Harra ganama barii saatii tokkotti Keeniyaa magaala Naayroobii mana barumsaa dhuunfaa tokkorratti balaa dhaqqabeen lubbuun barattootaa 7 darbeera.
Balaan dhaqqabe kutaan barnootaa daa’imman keessatti baratan barattoota barnootarra turanirratti jiguu yoo tahu, balaa kanaan barattoota lubbuun dabre torbanitti dabalata 57 balaa salphaa fi cimaan irra dhaqqabeera jedhe mootummaan. Saayrus Ogunaa dubbi himaa mootummaa Keeniyaati.
Balaa dhaqqabe kanaaf eenyutu itti gaafatama gaaffii jedhu gaafatamaniis dubbi himaan kun, ammaaf mootummaan qorannoo taasisuutti jiraa jechuun gaazexeessitootaaf deebisan. Waajjirri Qorannoo Qulqullina gamoo Keeniyaa garuu balaan kun qulqullina ijaarsaarraa dhufee jedhee jira. Balaa kana booda mana barumsaa kana ka daawwachaa turan Mooses Nyaakiyoongooraa hoogganaan Waajjira Qorannoo Qulqullina gamoo biyyattii warri qulqullina gamoo mana barnootaa kanaa ilaale sirriitti hin sakattaanee, jechuun ka’umsi balichaa rakkoo qulqullina ijaarsaa ta’uu beeksisanii jiru. Dabalaniis magaalattii keessatti gamoowwan qulqullina hin qabne hedduun ijaaramaa akka jiran himanii mootummaan biyyattii warra akkas maal na dhibeen gamoo ijaarurratti tarkaanfii ni fudhata jedhan.
Akka lakkoofsa warra awurooppaa bara darbe hagayya bara 2018 Naayroobii naannoo Hurumaa jedhamutti haaluma wal fakkaatuun gamoon moofa’e jigee lubbuun nama sadii darbuun ni yaadatama.
Ugaandaan Sababaa COVID-19n Manneen Barnootaa Cufamanii Turan Bante
Dho’iinsi Gaanaa Keessatti Muudate Lubbuu Hedduu Galaafate